I-Den eHusthwaite Gate - I-Airbnb
I-Den eHusthwaite Gate
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguTeena
I-Den ipholile kwaye itofotofo ibe inikezela ngendawo yokuhlala entle kwiindwendwe eziya kutsho kweziyi-6 (abantu abadala nabantwana). Sisakhiwo esitshintshwe ngobulumko nesinovelwano kwindawo eyayikade isecaleni kwesikhululo sikaloliwe sasekuhlaleni (savalwa ngoo-1960). Izinto bezisenziwa ngebhayisekile ibe zinendawo ekhethekileyo yamaplanga ngaphakathi kodwa zizuza kwizinto ezifakelweyo zakutshanje netekhnoloji Ikwindawo yabucala nepholileyo emaphandleni avulekileyo neendawo ezintle onokuzibona neendawo ezintle onokuya kuzo.
I-Den ithatha indawo yayo. Inendawo yayo yokungena, indawo yayo yokungena, indawo yokupaka imoto yabucala, indawo ekhuselekileyo yangaphandle (ingca) ishawa kunye nesakhiwo sangasese, i-bbq egqunyiweyo kunye nendawo yokubasa umlilo kunye nebhafu yamaplanga enamanzi ashushu. Zonke ziindawo ezivulekileyo kwindawo entle.
Nangona sikwimizuzu nje embalwa ukusuka kwizitrato ezinkulu, indawo ekufutshane intle kwaye ipholile ngenxa yeendlela neendlela zokuhamba ngeenyawo. Ihashe elimhlophe elidumileyo e-Kilburn lingabonakala ukusuka kwisayithi.
Umbuki zindwendwe ngu- Teena
Sihlala kufutshane newebhsayithi, ngoko nangona iindwendwe zonwabela indawo yabucala enendlela eyahlukileyo yokungena, sikhona ukuze sincede xa kufuneka njalo.